Levonorgestrel inowanikwa mumapiritsi ekudzivirira kubata pamuviri, asi Chirongwa B chine muyero wepamusoro unogona kushandura huwandu hwemahomoni emuviri wako. Mahomoni ekuwedzera anogona, zvakare, kukanganisa
Kuwedzera Cardiovascular, Muscular Strength uye Exercise Tolerance. Pamusoro pekuwanda kwemapfupa, kumhanya semuchinjika-kurovedza muviri kunogona kupawo zvakasiyana zvachose aerobic ruzivo kumutyairi webhasikoro, anotungamira.
Cycle 25 yeAmerica's Next Top Model inguva iri kuuya yaifungidzirwa kuti ichatanga paVH1 imwe nguva muna 2019. Kubva muna 2020, hapana zviziviso zvaitwa.House
Mushure meanoda kusvika makore manomwe, Christopher Paolini achange achiburitsa bhuku rake rechishanu kubva munhevedzano Yenhaka Cycle yakanzi Fork, Muroyi, uye Gonye. The fantasy novel iyo
Mubvunzo: Sei Cycle Yangu Iine Mazuva makumi matatu nemaviri
Chii Chinokonzera Kuenda Kumwedzi Kwakareba? Kutenderera kwenguva refu kunokonzerwa nekushaikwa kweiyo ovulation nguva dzose. Munguva yenguva dzose, kudonha kweprogesterone kunounza pakubuda ropa. Kana
Mubvunzo: Sei Washer Yangu Isiri Kuchinja Mahara
Chikonzero chinoita kuti washer isafambe kuenda kune inotevera kutenderera zvinoenderana nerudzi rwewachi yaunayo: Muchina wekugezesa usingapedze kutenderera unogonawo kuva ne
Mubvunzo: Sei Hydrologic Cycle Yakakosha
Iyo hydrologic kutenderera kwakakosha nekuti ndiyo nzira iyo mvura inosvika kuzvirimwa, mhuka uye isu! Kunze kwekupa vanhu, mhuka nemiti nemvura, inofambisawo zvinhu zvakaita sekudya, utachiona
Mhinduro Yekukurumidza: Sei Tca Cycle Inonzi Tricarboxylic Acid Cycle
Iyo Krebs cycle inozivikanwawo se citric acid cycle kana TCA (tricarboxylic acid) cycle nokuti citric acid ine 3- COOH mapoka uye ndiyo yekutanga chigadzirwa che.
Mhinduro Yekukurumidza: Ko Kuchovha Mabhasikoro Zuva Nezuva Kunondibatsira Kuderedza Uremu
Weight manejimendi Kukwira bhasikoro kazhinji, kunyanya pakusimba, kunobatsira kudzikisira mazinga emafuta emuviri, izvo zvinosimudzira hutano kutonga uremu. Uyezve, iwe uchawedzera metabolism yako uye kuvaka mhasuru, iyo inokutendera iwe
1 2 ... 26,103 Next